Weriyeyaal madax-banaan oo lagu xiray Vietnam
Mareykanka wuxuu ka walaacsan yahay Nguyen Thanh Nha, Doan Kien Giang, iyo Nguyen Phuoc Trung Bao, oo ah seddex saxafi oo madax banaan oo ay xireen mas'uuliyiinta Vietnam bishii Abril 20-keedii, iyo sidoo kale saaxiibkood, Truong Chau Huu Danh, oo la xiray dabayaaqadii Disembar. Dhammaan afartoodan waxaa lagu soo oogay sida ku xusan Qodobka 331 ee Xeerka Ciqaabta ee Vietnam, kaas oo mamnuucaya " ku takri-falka xorriyadaha dimoqraadiga ah ee ku xadgudbaya danaha Dawladda.” Waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarig ah.
Truong Chau Huu Danh waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha, waxna ku qora shabakadda wararka madaxa-bannaan ee fadhigeedu yahay Facebook ee Bao Sach, ama " Clean Newspaper." Sida laga soo xigtay Gudiga Madaxa Banaan ee Ilaalinta Suxufiyiinta ee aan macaash-doonka ahayn, markii la qabtay Danh bishii Diseembar 17deedii, 2020, Bao Sach waxa uu in ka badan 100,000 oo taageerayaal ku lahaa Facebook. Waxa ay soo bandhigtay mowduucyo ay ka mid yihiin musuqmaasuq waxayna soo bandhigtay sawirrada mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo lagu tuhmayo inay dano gaar ah ka shaqeeyaan. Bogga Facebook ee Bao Sach ayaa la joojiyay kadib markii la xiray Danh.
“Xarrigga loo geystay saxafiyiintan afarta ah ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee dhibaatada ka taagan xariga iyo xukunada muwaadiniinta reer Vietnam iyagoo adeegsanaya xuquuqdooda ra’yi dhiibashada iyo hadalka sida ku cad dastuurka Vietnam,” ayuu afhayeenka wasaarada arimaha dibada Ned Price ku yiri hadal qoraal ah.
“Mareykanku wuxuu ugu baaqayaa maamulka Vietnam in ay sii daayaan dhammaan dadka sida xaq darrada ah ku xirxiran isla markaana ay u oggolaadaan dhammaan shakhsiyaadka ku sugan Vietnam in ay si xor ah u soo bandhigaan aragtiyadooda si xor ah iyo iyagoo aan ka cabsanayn aargudasho. Waxaan ka codsaneynaa dowladda Vietnam in ay hubiso in ficilladooda ay la jaan qaadayaan qodobada xuquuqda aadanaha ee dastuurka Vietnam iyo waajibaadkeeda caalamiga ah iyo ballanqaadyadeeda,” ayuu yiri.
“Xorriyadda saxaafadda ayaa aasaas u ah daah-furnaan iyo maamul isla xisaabtan leh. Qorayaasha, dadka wax qora, iyo saxafiyiinta inta badan waxay shaqadooda ku qabtaan iyagoo halis weyn ku jira, waxaanan ku boorineynaa dowladaha iyo muwaadiniinta aduunka in ay hubiyaan ilaalintooda.”